Vaovao - Ahoana ny fampidinana ny harato fiompiana akoho
Ny indostrian'ny fiompiana dia indostria lehibe ary ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiompiana dia tena tsara. Mino izahay fa mora sy tsy lafo ny fiompiana akoho, ka maro ny toerana azo isafidianana hiompiana akoho. Mba handeha amin'ny fiompiana, dia matetika izy ireo no misafidy ny mampiasa harato fiompiana Miresaka momba ny ventilation dia tena zava-dehibe, ary raha mahantra ny ventilation mahomby, dia mety hisy olana, ka ahoana? Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny fomba fampidinana rivotra amin'ny harato fiompiana.
1. Amin'ny fitantanana manaraka ny famokarana broiler amin'ny ririnina, ny rivotra sy ny fifanakalozana rivotra no tokony ho tena ifantohan'ny saina. Ny fepetra manokana dia toy izao manaraka izao. Ny tranon'ny akoho amam-borona manana ventilation mekanika dia alefa amin'ny alàlan'ny fantson-drivotra miovaova. Ao amin'ny tranom-borona tsy misy rivotra mekanika, ny fivoahana rehetra, toy ny varavarana, ny varavarankely ary ny jiron'ny lanitra, dia tsy tokony hikatona mba hahazoana rivotra madio ao an-trano raha tsy mangatsiaka.
2. Amin'ny fitantanana ny famokarana broiler amin'ny ririnina sy amin'ny tapany voalohan'ny vanim-potoana, dia tsy maintsy jerena ny rivotra sy ny hafanana. Ny fepetra manokana dia toy izao manaraka izao. Ampitomboy ny rivotra amin'ny toetr'andro rehefa mitombo ny mari-pana tsy misy rivotra amin'ny ririnina, ary sokafy ny varavarankely ho an'ny rivotra isan'andro rehefa avo ny mari-pana any ivelany eo anelanelan'ny 10 sy 15 ora alina. Mitandrema amin'ny rivotra tsara rehefa tonga ny rivotra mangatsiaka, ary izany dia afaka manokatra ny jiro sy ny rivotra amin'ny tany amin'ny varavarankely.
3. Araho ny fitsipiky ny rivotra: "Aza ventilate raha misy rivotra, miaro amin'ny rivotra." Ny tanjon'ny ventilation dia ny famatsiana oksizenina ilaina ho an'ny andian'omby, ny fampihenana ny fifantohan'ny entona mampidi-doza toy ny amoniaka, ny fampihenana ny hamandoan'ny trano, ny fanesorana ny vovoka sy ny loto, ary ny fanomezana tontolo iainana mety ho an'ny omby.
Ny fampiasana harato fiompiana tsara dia afaka manao ny asany tsara ary tena manampy ny rehetra. Raha manana fahalalana hafa ianao ary te hahafantatra dia afaka mifandray aminay ianao mba hifampidinika na hijery ny fampahalalana mifandraika amin'izany amin'ny Internet. Mandeha tsara ny orinasa amin'izao fotoana izao, ary amin'io lafiny io dia manana talenta lehibe sy vondrona fitaovana mandroso ary mino izahay fa hahomby izany. Manantena ny fanohananareo hatrany izahay.